कम्पनी विश्लेषण: मङ्गलवार, २३ वैशाख २०७१ | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण: मङ्गलवार, २३ वैशाख २०७१
on: २३ बैशाख २०७१, मंगलवार ००:०० लगानी
कम्पनी विश्लेषण: मङ्गलवार, २३ वैशाख २०७१
सञ्चालन मिति : सन् १९९५
पछिल्लो कारोबार मूल्य : रू. ५४५
५२ हप्ताको उच्च मूल्य : रू. ७४२
५२ हप्ताको न्यून मूल्य : रू. ४८१
१८० दिनको औसत मूल्य : रू. ५७३.७२
शाखा : ५०
अध्यक्ष : सत्यनारायण मानन्धर
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : अजय श्रेष्ठ
मैनबत्ती चित्र : कम्पनीको शेयरमूल्यले बनाएको मैनबत्ती चित्र हेर्दा आगामी दिनमा शेयर थप सस्तिनसक्ने देखिएको छ । चित्रमा कालो ≈यामरपछि बनेको स्टारले पनि प्रवृत्ति फेर्न नसकेको देखिन्छ । अन्तिम दिनको कारोबारमा बनेको कालो मैनबत्तीमा छोटो टुपी र लामो पुच्छर देखिएको छ । यसले विक्रीचाप बढ्दो क्रममा रहेको र मूल्य घट्ने प्रयास गरिरहेको देखाउँछ । तर, यही चित्रलाई मूल्य निकै घटिसकेपछि विस्तारै सुधार हुन थालेको विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ । यदि त्यसो भएमा आगामी दिनमा मूल्य बढ्न सक्छ । आइतवारको व्यापारले शेयरमूल्य घट्ने वा बढ्ने विश्लेषण गर्न थप मद्दत पुग्नेछ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ७ दिने मुभिङ एभरेज रेखाले शेयरको बन्द मूल्यलाई माथितिरबाट काटेको छ । यसले शेयरमूल्य घट्ने सङ्केत गर्छ ।
आरएसआई : कम्पनीको रिलेटिभ स्टे«न्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले ४६ दशमलव ६८ स्केलमा छ । यो अझै पनि न्यूट्रल जोन (तटस्थ क्षेत्र)मै छ । गतसातादेखि लगातार ओरालो लागेको आरएसआईले बजारमा शेयरको माग घट्दै गएको र विक्री चाप बढ्दै दएको देखाएको छ । यसको परिणाम मूल्य थप सस्तिन सक्छ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन विश्लेषणले लगानीकर्ताको जोखीम र अवसर घट्दै गएको देखाउँछ । शेयरमूल्यको उतारचढाव निकै साँघुरिइसकेकाले जोखीम र अवसर दुवै घटेको हो । यस अर्थमा उक्त कम्पनीमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुनसक्छ ।
-गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैङ्कको खुद नाफा १७ दशमलव ०३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ४२ करोड ७८ लाख रहेको बैङ्कको खुद नाफा चालू आवको सोही अवधिमा घटेर रू. ३५ करोड ४९ लाखमा झरेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा चुक्ता पूँजी १८ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
-गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ६२ करोड १७ लाख रहेको सञ्चालन मुनाफा १५ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेर रू. ५२ करोड ४८ लाखमा झरेको छ । बैङ्कको कर्मचारी खर्च ३३ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर रू. २८ करोड ८ लाख नाघेको छ । त्यस्तै, अन्य सञ्चालन खर्च ७ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेर रू. २८ करोड ७० लाख पुगेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको कुल सञ्चालन आम्दानी १ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब २० करोड नाघ्न पुगेको छ ।
-बैङ्कको चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा दीर्घकालीन लगानी ३६ दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेर रू. ५ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । त्यस्तै बैङ्कको कर्जा पनि २० दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर रू. २६ अर्ब १० करोड पुगेको छ ।
-समीक्षा अवधिमा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी १ दशमलव १६ प्रतिशतले घटेर रू. ८८ करोड ७६ लाखमा झरेको छ । सोही अवधिमा बैङ्कको ब्याज आम्दानी ९ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, ब्याज खर्च १९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।
-गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैङ्कको कुल निक्षेप २२ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेर रू. २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । बैङ्कको अपरेशनल मार्जिन शून्य दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेर शून्य दशमलव २७ प्र्रतिशतमा झरेको छ । प्रोफिट मार्जिन शून्य दशमलव ०६ प्रतिशतले घटेर शून्य दशमलव १८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
-गत आवको तेस्रो त्रैमासमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा चालू आवको सोही अवधिमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेर १ दशमलव ५२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
-समीक्षा अवधिमा बैङ्कको सम्भावित जोखीम प्रयोजन २९ दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेर रू. ११ करोड २ लाख पुगेको छ । बैङ्कको चुक्ता पूँजी गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १४ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९२ करोड नाघ्न पुगेको छ ।